कोभिड–१९ : सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले यो संकटको समयमा के गर्ने र के नगर्ने ! | Shirish News
सञ्चारमाध्यमले कोभिड–१९ को संकटको बेलामा दोषारोपण र भेदभाव घटाउन कसरी सहयोग गर्न सक्छन्?
कहिलेकाहिँ सानो समुदायमा बस्ने मानिसहरूको स्थान, समुदाय वा गाउँको नाम उल्लेख गर्दा मात्र पनि उनीहरूको परिचय खुलासा हुन सक्छ । विरामीको फोटो वा भिडियो पनि अनुमतिविना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुहुँदैन ।
कसैको उमेर, लिंग, जातीय पृष्ठभूमि, धर्म, कानूनी अवस्था, अपांगता, बैबाहिक अवस्था, रोगलगायतका कुरा समाचारसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्वन्धित भएमा मात्र उल्लेख गर्नुपर्छ । असान्दर्भिक रूपमा उल्लेख गर्नाले दोषारोपण र विभेद सिर्जना गर्न सक्छ । कोभिड–१९ लाई कुनै पनि स्थान, देश र क्षेत्र, राष्ट्रियता र जातसँग नजोड्नुहोस् । भाइरसले जुनसुकै सामाजिक र आर्थिक अवस्था, राष्ट्रियता, वर्ण, जात, धर्म वा लिंग भएको मानिसलाई असर गर्न सक्छ।
मानिसहरूले “कोभिड–१९ सार्ने”, “अरूलाई सार्ने” वा “भाइरस फैलाउने” जस्ता शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस् किनभने यसले नियतवश संक्रमण फैलाएको भन्ने अर्थ लाग्दछ र दोष देखाउँछ । यसको सट्टामा मानिसहरूमा कोभिड–१९ “भएको” वा “संक्रमण भएको” भन्नुहोस् । साथै, यो रोग भएका मानिसलाई “कोभिड–१९ केसहरू” वा “पिडितहरू” नभन्नुहोस् । साथै, “कोभिड–१९ का शंकास्पद” वा “शंकास्पद केसहरू” को प्रयोग नगर्नुहोस् । यसको सट्टामा “कोभिड–१९ भएका वा हुन सक्ने व्यक्ति”, “कोभिड–१९ को उपचार गराइरहेका व्यक्ति”, “कोभिड–१९ बाट निको भइरहेका व्यक्ति” वा “कोभिड–१९ को संक्रमणपछि मृत्यु भएका व्यक्ति” भन्नुहोस्
सत्यको खोजी तथा मिथकको सहि विश्लेषण
कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित आधिकारिक तथा विश्वसनीय जानकारीको लागि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन र युनिसेफजस्ता संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरूका वेबसाइट हेर्नुहोस् । यी वेबसाइटहरूमा तपाईंको जिज्ञासाको जवाफ दिन सक्ने अद्यावधिक जानकारीसहित प्रवक्ताको बारेमा पनि जानकारी राखिएको हुन्छ।
पछिल्लो समयमा संयुक्त राष्ट्र संघका विभिन्न निकायहरूको नाममा गलत सन्देशहरू प्रसारित भएको कुरामा यहाँहरू सबैलाई सचेत गराउन चाहन्छौँ । यदि तपाईंले एसएमएस र ग्रुप च्याटको माध्यबाट त्यस्ता जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो सही हो की होइन भनी छुट्याउनका लागि तल उल्लेखित आधिकारिक साइटहरूको प्रयोग गर्नुहोला ।
कुनै पनि हल्ला तथा मिथकको सत्य–तथ्यको खोजी गर्न सञ्चारमाध्यमको उल्लेखनीय भूमिका हुन्छ । तपाईंले कुनै पनि गलत सूचना वा अफवाहहरू यो साइट मार्फत रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईंले नेपालको कोभिड–१९ हटलाइन १११५ र ११३३ मा फोन गरेर पनि यस्ता हल्लाहरूको बारेमा जानकारी दिन सक्नुहुन्छ ।
कोभिड–१९ प्रकोप हरेका लागि एक चुनौतीपूर्ण समय हो । हामी सबै जना एक वा अर्को गरी कुनै न कुनै हिसावले प्रभावित छौं । यो अनुभवबाट सकारात्मक हिसावले हामी सबैजना ठीक भएको सुनिश्चित गर्न सञ्चारमाध्यमसहित हामी सबैजनाको महत्वपूर्ण भूमिका छ ।
-यो सामग्री युनिसेफले तयार गरेको गाइडलाइनमा आधारित हो ।